သေရှာဘီ Dead | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » သေရှာဘီ Dead
Posted by ムラカミ on Mar 12, 2012 in Computers & Technology | 33 comments
လက်ပကျွတ် ကလေးတော့ အသက်ထွက်သွားရှာဘီ ….
အမျှ အမျှ အမျှ …..
၂၀၀၈ ကုန်စည်ပြပွဲတုန်းက ၀ယ်ထားတာလေး…..
(အဟဲ ..မာကတ်တာ များ ယုတ်မာချက်ပြောပါတယ်…)
ပါးစပ်ကသာ ကော်ပီရွိုက် အော်နေတာ ….
(၁၀၀လောက်သက်သာလည်း နည်းလား ဆိုပီး ရန်ကုန်ပြန်ပီးကိုဝယ်တာ ..ခိခိ…)
အိုအက်စ် အစ သုံးသမျှ အပျော့ထည် အကုန်လုံး ပိုင်းရိတ်တက်တွေချည်း…
အပျော့ရဲ့ ပြတင်းပေါက် အမှတ်-၇ အာလတီမိတ်… အဟတ်အဟတ်..
အပျော့ရဲ့ မြင်ကွင်းစတူဒီယို ၂၀၀၈ … အလဲ့လဲ့လဲ့…
အပျော့ရဲ့ ရုံးခန်းစု ၂၀၀၇ …. အမယ်မယ့်မယ့်…
လာထား …ဒေါ်လေးအဒိုဘီရဲ့ ..ခွီအေ့တစ်ဗ် ဆု …အဟိ… အလင်းခန်း …. (ပလက်ဂင်လေးဒွေတောင် ခိုးသုံးထားသေး ..သွပ်သွပ်…)
ဆိုနီ အက်ဆစ် ဆီနီမာ ဆင့်ခ်ျ ပလက်တီနာမ် …ညှင်းညှင်း …
ဒါတောင် ခုတလော မသုံးဖြစ်တဲ့ ..ဆောင်းဖို့ဂ်ျ တွေ ဖလူးတီး လုပ်ပ် တွေ မပါသေး…
အော် …မောင်ဂီ ဆိုတာ သာခိုးဂျီးပါလားကွယ်…ရို့…
သူများ ဦးနှောက်တွေ ခိုးထားတဲ့ အကုသိုလ်က ကြီးလေတော့…
၀ဋ်လိုက်တာများပြောဘာဒယ်… ပြည်တွင်းမှာ အပျော့ထည် ဈေးကွက်ဖြစ်မလာသေး…
ပြောပြရင် အသည်းနာသွားမယ်…. အဲ့ထက်ဆိုးရင် မေးရိုးကြမ်းပြင်ရိုက်သွားမယ်…
မျက်ရည်ဗူးသီးလုံးလောက်ကျ မယ့် အဖြစ်တွေပါဂျာ….တော်သေးဘီ..
ပျက်သွားမယ်ဆိုလည်း ပျက်သွားလောက်ပါတယ်လေ… .ထည့်ထားတဲ့အပျော့ထည်တွေကြည့်ရုံနဲ့တင်..
ကျုပ်ဘယ်လောက်ညှင်းထားမယ်ဆိုတာ ….သိလောက်ရောပေါ့ ..အဟတ်အဟတ်..
သူ့ခမျာ ကျန်းမာရေးမကောင်းတာ ကြာလှပေါ့ …ဘက်ထွီယူနစ်က စ ဂန့်သွားတာ …
ဟီး ..ပေါ့တေးဘယ်လ် မဖြစ်သော လက်ပကျွတ် လေး ပေါ့ဗျာ….
ကြိုးတန်းလန်းနဲ့ သုံးရတာကိုး …. ဒဲလ်ပစ္စည်းများ မာတာပြောပါတယ်…
ခြေညှိုးနေ့ ခြေမညှပ်ပြီးသာ ပလပ်ဖြုတ်လိုက် ..အဲ့ဒါ ရှပ်ဒေါင်းပဲ…
(သူများသာ ဆြာလုပ်ပြီး ဟိုလိုသုံးပါ သည်လိုသုံးပါပြောနေတာ.)
မောင်ဂီ ဆိုတာ ဂယ်တော့ အပေအတေရယ်…
သည်မနက် အပျော့ထည် လေးစာရင်းချလုပ်ကြည့်ပါတယ်. ..အပျော့ဖိုးတင် အစိမ်း၃၀၀၀လောက်ဖြစ်နေသကိုး..
ခု ၀ယ်ရတော့မယ် ဆိုတော့ ..ပျားတုတ်ပြီ….
တိုက်တိုက်လေးရယ်မှ ဆိုင်ဆိုင်ဗျာ ..ဘယ့်နှယ့် အိမ်ပြောင်းခါနီးမှ….
ကျုပ်ကလည်း တည ထမင်းမစား ဘဲ နေဆိုရင်သာနေနိုင်တာ..
တည ပီစီမပွတ်ရရင် နေကို မနေတတ်တာ…..
မပြောင်းခင် ပိုက်ပိုက်ကုန်ဦးမယ့် သဘော… လေဘာဒယ်အေ…
လက်ပကျွတ်လေးလက်ဆောင်ပေးမယ့် စိုင်လေးတစ်ကောင်လောက် မိတ်ဆက်ပေးကြပါ..အာဟိ…
နောက်တာပါဂျာ …ဂယ်က သူများသာ ဈေးဝယ်လမ်းညွှန် လုပ်နေတာ …
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကျ ဘာဝယ်ရကောင်းမှန်း သိတာမဟုတ်ဘူးရယ်….
ရည်းစားဦး ပန်းသီးကိုတော့ မ၀ယ် ဘူး ..စိတ်ချ…..
(ဒါ့ပုံတို့တာ အလွန်ကောင်းပေမယ့်… မဖြစ်ဘူးဗျ… ကျုပ်က အပျော့နဲ့လက်ထပ်လိုက်ပီ ..အာဟိ..)
ဒဲလ် ၀ယ်ချင်ပေမယ့် … အဲအိဂေါ့(အင်းဂလိ) လိုသုံးချင်ရင် ၁ပါတ်စောင့်ရတယ်တဲ့ …သဂျီးရဲ့ ….
ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်သုံးတာမှာတော့ ….ဘူးသီးကြော်နဲ့ သုံးရမှာတော့ လိုဂျင်ဝူးရယ်….
အိုက်ဒါနဲ့ဘဲ … လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီး သကာလ …..ဘယ့်နှယ့်ဗျာ ….
ပရိုဒတ်ရှင်း လိုင်းတခုလုံး ဘယ့်နှယ့်ဖြစ်ကုန်သည်မသိ….
ဆိုနီကလည်း ဇီး Z Series တဲ့
တိုရှီဘာ ကလည်း Z တဲ့….ဘယ့်နှယ့်ဖြစ်နေတာတုန်းကွယ်ရို့ ……….
အိုက်ဒါနဲ့ဘဲ … အော်.. HP လေးလည်း ဆိုးပါဝူးလေ ဆိုရှာတော့…..
အံမယ်… မဆိုး …. မှတ်တယ်… ဒက်စတွက် စီးရီးလိုက် ကြီး Z ဇီးဆိုတာပြူးနေတာပဲ…
လက်ပကျွတ်မ၀ယ်ဘဲ ပါဝါးဖူးလ်ဖြစ်တဲ့ ဒက်စတွတ်ဝယ် အိမ်မှာထိုင်သုံးမလား တွေးတော့ ပြောပါတယ်..
တနေကုန် လက်ပကျွတ်-ဒက်စတွတ်-တက်ဘလွတ် ကြားထဲ လူလည်း ဘတ်လဘိုင်လိုက်နေဘာဘီဂျာ..
ဈေးသွားမေးကြည့်လိုက်တော့လဲ … အဟွာနဲ့ တွဲယူရင် အဟွာပါ ရမယ်
ဒီဟာနဲ့ တွဲရင် ဒီဈေး ဟိုဟာနဲ့ တွဲရင် ဟိုဈေး…..
ခွီးတဲ့မှဘဲ …အေဘေး မာကတ်တာဒွေ …. ပက်ကေ့ခ်ျ လုပ်ရောင်းနေမှတော့…
လူက ဘယ်ဟာ တန်တယ် ဘယ်ဟာ မတန်ဘူး ..ဘယ်လိုမှကို ကွန်ပဲယား လုပ်မရတော့ဝူး…
ဖီချာ နဲ့ ပရိုက်ဇ် သက်သက်ကြီး ချိန်လို့ ဆလို့ကို မရ၀ူး…
ဘရန်းဒွေ လွိုင်ရယ်လ်ထီ တွေ ကလည်း လာသေး…
အေဘေးဒွေ ကိုယ့်ဂျင်းကိုယ့်ဂျင်းဆိုပြီး ဈေးတော့လျော့ပေးမယ် မရှိ……
(ပရိုက်ဇ်ကိုတော့ မထိပါနဲ့တဲ့ ….. အောင်မယ်ငီး ..ကိုယ့်အလုံးနဲ့ကိုယ် အပေါက်ခံရတာ အနာဆုံး…
ကိုယ့်အလုံးကိုယ်ပြန်နင်တယ် ဆိုတာ ဒါမိုး….)
ကျုပ်ကို ပီစီ ကူရွေးပေးကြပါဦး ရွာသူား တို့ရယ်…
ခုတလော စိတ်ဖိစီးမှုများလို့ ….. ချင့်ချိန်သုံးသပ်တဲ့အပိုင်း အလုပ်မလုပ်လို့ပါ……
စိတ်ကူးမလွဲနဲ့ မောင်ဂီ …
ASUS အောစုပဲဝယ်…. အောစုပဲ ကောင်းတယ်…
ဘာလို့လဲဟင်င်င် စု ပါလို့
Ko Ghi, try to use Asus N43S, Cuz i m also using that one in present. Its quite good. Here is for review http://www.f-paper.com/?i589271-Photo:-main-entertainment-notebook-ASUS-new-N43S-Reviews, (Justasuggestion).
ကျုပ်က အောစုဘုတ် အောစုကတ်
၀မ်းတဆက် ဆို သိပ်သဘောကျတာ…
ခုနောက်ပိုင်း အောစု လက်ပကျွတ် လောကထဲ အတော်လေး
ဂယ်က ဖြစ်ရပ်ကြီးတခု ရှိခဲ့တယ်ဗျာ…
အရင်က မားကတ်လီဒါက ကွန်ပက်
ကွန်ပက် ငွေကျပ်တုန်း ..ပိုက်ဆံရှိတဲ့ အိပ်ခ်ျပီ က ၀ယ်ရော…
(ဈေးကွက်မှာ ကွန်ပက်တွေပျောက် အိခ်ျပီတွေပဲထုတ်…)
ပရင်တာ ထုတ်တဲ့ကောင်က လက်ပကျွတ် ထုတ်ရသလား
ကောင်းပ့ါမလား ဆိုပီး လူတွေက မ၀ယ်ရဲ…..
မာဂျာ ပိုင်းမှာလည်း မန်းနေ့ခ်ျမန့် တိုင်ပတ်နေ
အဲ့ …အချိန် နံပါတ်-၂ဖြစ်နေတဲ့ ဒဲလ် က ကျော်တက်…
လီဒါ ဖြစ်လာ …. အပျော့ရဲ့ ၆၃မကျတဲ့ ဗစ်စတာ က
ဒဲလ် ကိုဆွဲချ… ဒဲလ်ရဲ့ ရှယ်ယာတွေကို ဘယ်သူတွေက
စားသွားလဲ ဆိုတော့ အိုင်ဘီအမ်က ပီစီလိုင်းကို ၀ယ်လိုက်တဲ့
လီနော်ဗို ရယ် အိပ်ခ်ျပီ အင်ဂျင်နယာဟောင်းတသိုက် ထောင်ထားတဲ့
ဒီဇိုင်းပိုင်း အင်မတန်လှတဲ့ အောစုရယ်…
အဲ့ဒါနဲ့ ဇာတ်ပေါင်းတော့ အိပ်ခ်ျပီ က နံပါတ်၁ဖြစ်လာ…
အိပ်ခ်ျပီ အိပ်ခ်ျပီကျူ တဲ့ ကွန်ပက် ဆိုပြီး ၃မျိုးပြန်ထုတ်…
ဒဲလ်က အဆင့်၃ ကို ဆင်းသွား အေဆာ နဲ့ လီနော်ဗို
သူတို့တွေ အောက်မှာ ဂငယ်ငတုံးတွေရဲ့ ဖူဂျစ်ဆု
တို့ တိုရှီဘာ တို့ ဆိုနီ တို့ ရှိလေရဲ့….
ပြောရခက် ရွေးရခက် ကြီး ကို ဖြစ်နေတော့တာ…
အော်…. ကမ္ဘာပြားပီ ကိုး…
စု ချစ်သူများအတွက် အောစု ဆိုပြီး ကြော်ညာ ထွက်လာတော့မယ်နဲ့တူတယ် ဂီ။ :grin:
ဒို့ကတော့ လက်တော့သွားဝယ်တုန်းက ဆိုင်တွေက ဘာအမျိုးအစားလိုချင်လဲ ဘယ်လိုသုံးမှာလဲစသဖြင့် မေးကြတာပေါ့လေ … ပြန်ဖြေလိုက်တာက လက်ပကျွတ် လှလှလေးတစ်လုံး လိုချင်တာလို့
လှတာမက်ရင် ဒုက္ခရောက်မယ်နော်လို့ ဘယ်လိုပဲပြောပြော လှတာကိုပဲလိုချင်လို့ ပန်းရောင်လေးပဲ ၀ယ်လိုက်တယ် …
ငါ့ရဲ့တတ်ဘလုတ် လဲ သေရှာပြီ။
ဟောင်ကောင်း တိုင်ဝမ်း ကိုရီးယားတွေမှာ
အလုံးရေ ရာဂဏန်း နဲ့အထက် ယူရင် တံဆိပ်မကပ်ဘဲ
(ကိုယ့် တံဆိပ် ကိုယ်ကပ် ပြီးရောင်းလို့ရ) တဲ့ မိတ်ကာတွေရှိတယ်ဗျ…
OEM သမားဒွေ …
အဲ့နေရာတွေ ဆက်သွယ်ပြီး Suu ကို theme လုပ်ထားတဲ့
လက်ပကျွတ် ၊ တက်ဘလွတ် နီနီရဲရဲလေးတွေ
ထုတ်ရောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် ဘီလျံ ဘစ်ဇနက်စ်ပဲ….
သူများထက် အရင် ဦးအောင် …ဒီဇိုင်းရေးဦးမှ…..
တလောလေးကပဲ.. ရုံးမှာ.. လက်ပတွတ်အသစ် တလုံး ၂၇၀နဲ့ ချိုင်းနားက၀ယ်ပြီး ကွန်တိန်နာ.. ဥရောပပို့ဖို့လုပ်နေတာ တွေ့လိုက်တယ်..။
မဆိုးဘူးပဲ..။ ပန်းသီးလိုလို.. ဒီဇိုင်းချိုးထားတာ…
E-Commerse က ပေါ်သင့်နေပါပြီဗျာ…
ခွက်ဒစ် အွန်လိုင်း ကတ်ရှ် လည်း ကောင်းလာမယ်..
ဒီဘက် ဘုစုလျူး ဘက်ကလည်း ကောင်းလာမယ် (ယာဉ်+လမ်း)
တနေ့တော့ တနေ့ပေါ့ …
ဒဲလ်ဝယ်လေ မောင်ဂီရယ် အိုင် ဆဲဗင်းလောက်ကိုဝယ်သုံးပေါ့
အောစု လက်ပကျွတ်လေးသုံးတယ်။ အတော်လေးတော့ မာရှာတယ်။ ၄ နှစ်လောက်ရှိပြီ ဒေါင်ဒေါင်မြည်ပဲ။ ဗိုင်းရပ်တော့ နှစ်ခါလောက်နှိပ်စက်လို့ အလူးအလဲ ခံရဖူးတယ် ။ သိမ်းသမျှ အကုန်ပြောင်။ ခုတော့ စာတတ်သွားပြီ။ ဖြစ်ဖူးမှပဲ သိတာ။
မိုးစက်ကတော့ရုံးမှာ compaq, အိမ်မှာတော့ lenovo
2 လုံးစလုံး အလကားရတာ
ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ samsaung net book လေးပဲဝယ်သုံးတယ်
အားလုံးသူ့ဘရန်းနဲ့သူမဆိုးပါဘူး ဒီမှာဒေါ့ အိုင်း၅ ဒီဗီဒီရွန်းပါတာ ၆၀၀အစိမ်းရှိတယ် ၉၀၀ကျော်ဆိုအိုင်း၇ ရပါတယ်ဒီဗီဒီရွန်းမပါဘူး ပန်းသီးနဲ့ဈေးနဲနဲပဲကွာတာ
ပန်းသီးကပျက်ရင်ပြင်ရတာဈေးကြီးတယ် အာစို့ဆိုရင်ပျက်ခဲတယ် ပြင်ရင်လဲဈေးပေါတယ် အခုသုံးနေတဲ့အေဆာ ၉လက်မ ဟာတ်ဒစ် ၁၂၀ဂျီဘီလဲတာ ၄၀ဒေါ်လှပေးရတယ်
အေဆာထက်အာစို့က ဈေကြီးတယ် (ကိုယ်သိတာကိုယ်ပြောတာ) အဆင်ပြေသွားမှာပါ
တစ်ချို့ ကလေး တွေကတော့ အသစ်လေး လိုချင်ပြီ ဆို အဟောင်းကို မသေသေအောင် ပညာရှိ နည်းနဲ့ သတ်ပြီး ငိုပြ တတ်ကြတယ်။ အာ ဟား တကဲ့ဆရာကြီးတွေနော်။
အခုတော့ လက်တွေ့ကြီး ကို ကြားလိုက်ရပြီ။
မပြောတော့ဘူး။မပြောတော့ဘူး။ ပြောကို မပြောချင်တော့ဘူး။ ;-)
နောက်တာ … အဟိ .. :-)
သများ လက်ပကျွတ် ကို သေလုနည်းပါးလုပ်ခဲ့တာ…
သများရဲ့ ချစ်လှစွာသော အကုသိုလ် အတုံးလိုက်အတစ်လိုက်
တက်နေတဲ့ ..ညီတော်မောင်ပါ …
သများက လီနော်ဗို ဒက်စတွတ် …သုံးခဲ့တာရယ်…
မနှစ်ကများ …သများ လေပြီး ..ဒီလခနဲ့ကတော့
ရွာပြန်ပြီး – ခံစားတာကမှ ကိုက်ဦးမယ် တွေးပြီး (-= အလှူ)
ဒက်စတွတ် ရန်ကုန်ပြန်သယ် …. ချစ်လှစွာသော ဘော့စုမှ…
ဂီ့ မှ ဂီ့ပဲ ဆို ပြန်ခေါ်လို့ …(သနားလို့) ပြန်လာတော့
ဒက်စတွတ် ..ပြန်မသယ်နိုင်တော့လို့ …(ကီလို-၂၀သာရ ….)
ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်သယ်တာ ..ဟို အေဘေးတွေရစ်တာမခံနိုင်လို့ ….
ဒင်း ဖျက်ဆီးထားတဲ့ …သများဝယ်ခဲ့တဲ့ ….လက်ပကျွတ်လေး ဆောင်ယူလာတာပါ…
(အဲ့ …. ဘိတ်လိုပြောဖြစ်ပြန်ဘီ …တယောက်သောသူကလေးအား သဒိရပါအိ)
ဂုဒေါ့ …ဂုဒေါ့ ….
သများ ပိုက်ဘော မိပါဘီချင့် ……
ဒင်း သုံးတဲ့ အော်ထိုကထ် နဲ့ သများ သုံးတဲ့ ..ဗစ်ဇွယ် စတာဒီယို မတည့်လို့…..
စစ်စတမ် ခွက်ရှ် ဖြစ်တာ ခနခန …(သူ့ဟာတော့ဖြုတ်လိုက်ပါဘီ…)
ဘယ်လိုဖစ်တယ်မသိ …. ဗစ်ဇွယ် စတာဒီယိုက အော်တိုကတ်များတွေ့ရင်….
အယ်ရာ ဆိုပီး ဒီဘာ့ဂ်မုတ် ရွမ်းမယ် ဆိုတာချည်း….. လေပါတယ်ချင့် ……..
ရည်းစားဦး ပန်းသီးတော့ မသုံးပါရစေနဲ့ချင့် …
ဘာလို့လဲဆို ..သများရဲ့ စိုင်လေးကလည်း….
(အောက်ပါ စာကို ကိုလေး၏ မင်းမှမင်း … တီးလုံး အလိုက်နှင့်ဖတ်ပါ…)
အို့ ….. ဒဲလ်မှ ဒဲလ် ပဲ .. ဒဲလ် မှ ဒဲလ် ပဲ ..ဟဲဟဲ ….
ဒဲလ်…. တခုတည်း ….. ဒဲလ် ပဲ …..
အဟတ်… ဒင်းလေးလည်း အပျော့ ပြတင်းပေါက်ဆာဗာ၂၀၀၈ ကွန်ဖီဂါရေးရှင်း ကိုင်တဲ့
နတ်ဝါ့ခ် ပရိုလေး ဆိုဒေါ့ ….အာဟိ…
အော်…. ကျေးကျေးပါ ..အပျော့ ရယ်….
၁။ သများ လုပ်စားရလို့…
၂။ သများ စကီလေး လုပ်စားရလို့..
၃။ သူ့ဟာသူ လုပ်စားနေတဲ့ စကီလေးကို သများ ကတ်စတမ်မာ ဆိုက်ဒ်ကို ရောင်းစားရလို့…..
ကဲ အပျော့ အားမပေးသင့်ဝူးလား ..
အော် … ရယ် …
ဂလိုပါ ….ညလေးရယ် …
အရင်တုန်းက ရွာထဲမှာ …ကိုဂျီးဂီ
အင်မတန်လေးစားရတဲ့ …အလွန် ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သော
မာကတ္တာကြီး တယောက်ရှိသကွဲ့ …. သူ့နာမည်က ဖားသက်ပြင်းတဲ့…
သူတီထွင်ခဲ့တဲ့ စကားလုံးတွေပါကွယ် ..ဘာတဲ့…
ခဏလေးနဲ့ ရွဲပြီး ကိစ္စချောသွားတာ …
အဲဒါ ကိုယ်တွေ့ .. ကိုယ်တွေ့ …..
Sony VAIO VPCEH3QFX/B Laptop Computer – Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 4GB DDR3, 320GB HDD, DVDRW, 15.5″ Display, Windows7Home Premium 64-bit, BlackModel#: VPCEH3QFX/B | SKU#: S170-155171
– $70.00 (11%)
$549.99 After Coupon
လက်ပကျွတ် သေလို့ သေဘီရေးတာလည်း
ကိုယ့်ပိုစ့်ဝင်မန့်ရင်း ကွမ်းသွေး စင်သွားရှာတယ်…
မစီးရတဲ့ ရထား ခဲနဲ့ထုတဲ့ ဟာဒွေ
ပြောပြန်ရင်လဲ ကြောင်ဖက်လွန်ရာကျမယ် ဂီဂီ…
Apple Macbook Aluminiun လေးသုံးနေတာ ၃နှစ်ကျော်သွားပါပြီ…ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွယ်…
OSX Lion နဲ့ Win7 Professional SP1 တင်သုံးထားပါတယ်…
ဂီရေ…Macbook Air လေးဝယ်ကွယ်…အားပေးတယ်…
ဂျော့ဘုစု – ကျနော်တို့ ပိုစ့်ပီစီ အီရာ့ခ် ကို သွားနေကြတာ
ဂိတ်စု – ကမ္ဘာကြီးဟာ ပီစီပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတာပါ
Mac Vs PC 2.0(Cloud Version)
ဒီစာကို အပျော့-၇ တင်ထားသော လီနော်ဗို အိုင်ဆဲဗင်း မှ မန့်သည်..
ဒို့ ဗမာတွေ ရဲစွမ်းပြသည် အာဇာနီ ပီပီ…☺♪
ဟိုက် ! ပြေးမှ …
ငါလဲ နီ တော့မှာ…. ။
ငဂီ.. ဦးကြောင်မှာ ပန်းသီးထက် အပုံကြီးသာတဲ့ ငှက်ပျောသီးရှိတယ်..။ လိုချင်သလား…။
ကိုယ်က word တစ်ခုပဲ သုံးတာပါ။
ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးဘာလေးတော့တစ်ခါတစ်လေ ကြည့်တယ်ပေါ့။
word ဖွင့်ပြီး ရိုက်လိုက်တိုင်း ပြုတ်ပြုတ်ကျနေလို့
အဲဒီ အစုတ်လေးကိုပဲ ကောင်းအောင်လုပ်ပြီး သုံးရဦးမှာပေါ့ကွယ်။
ဘော့စ် ရဲ့ တန်ခိုး နဲ့ နယူးအိုင်ပက် လေး ကို တို့ကြည့်ပြီးသွားပြီ ကွယ်။ ငှဲ ငှဲ ငှဲ ;-)
ရီစလူးရှင်း က မြင့်သလား၊ကြည်သလား မမေးနဲ့။
အနော်သုံးတာကလည်း အောစု ဘဲဗျ ကောင်းတယ် မဆိုး အာမခံကလဲ နှစ်နှစ် ဘယ်လက်တော့မှာမှ မပါတဲ့ ဘက်ထရီ အာမခံ တစ်နှစ် မဆိုးဘူး ဗျ။ k43s i5 -2430M 2.4Hz HDD640 GB memory 4G graphic 1G ။ dell က အာမခံ လေးနှစ်ဖြစ်သွားပြီပြောပေမဲ့ ပုံတုံးတယ်ဗျ။ နောက်ထွက်တဲ့ ဟာတွေဘဲလှတာ ဒါပေမဲ့ ဈေးက ခေါင်ခိုက်နေတယ်။ အောစုလဲ အာမခံ တစ်နှစ်ထပ်တိုးတယ်လို့ပြောတယ်။
Conisidence!! I also tried it today…
Bright, light and fast gedget ….
Though, it’sabridge between smart phone and pc.
Notapc replacement thing, i simply called it tablet device.
What i need isapc(laptop, desktop) or tablet pc.
Thinking again …to buy @ myanmar..
Pirates of silicon valley 2.0
ipad တို့.. tablet နဲ့ဖတ်လို့ရအောင်.. Market မှာတင်လို့ရတဲ့ App ရေးပေးမယ်ဆိုပြီး.. ကိုငွေထွန်းပုံပြောသွားတာ…
ဂီဂီက ဘာဝယ်မလို့လည်း.. ?
အော်ရယ်… ပန်းသီး ..သများက ချီးကျူးမလို့ ကြံကာရှိသေး…
အိုဗာဟိ အစ်ရှူး က တက်လာဘီ….
ဇဂါးမစပ် သဂျီး ….အန်းဒွိုက်သုံးတယ်ဆို…
မြန်မာဖောင့် မရှိဘဲ …ရွာကိုကြည့်ချင်တဲ့ …